Ahoana ny fametrahana ny macOS Monterey developer beta | Avy amin'ny mac aho
Nanomboka ny 7 jona lasa teo dia natolotra izany macOS Monterey amin'ny fiaraha-miasan'i Apple amin'ny alàlan'ny WWDC, tsy nitsahatra niresaka momba ny vaovao entin'ity rafitra fiasa vaovao ity izahay. Azoko tsara ilay fahatsapana mamaky saingy tsy afaka manandrana. Mampatsiahy ahy ilay sarimihetsika Al Pacino io rehefa nilaza izy hoe: "Jereo fa aza mikasika, kasiho fa aza manandrana ...". Raha tianao dia hanazava ny fomba fametrahana ny macOS Monterey Beta izahay. Mazava ho azy, mitandrema ary araho fotsiny ireo dingana raha fantatrao ny zavatra ataonao.
Te-hanondro alohan'ny hanombohana izany aho ny fametrahana betas dia mitera-doza foana fa misy olona afaka mieritreritra fa ny ankamaroany tsy afaka. Midika izany fa lasa lany andro ny Mac-ntsika satria nametraka Beta an'ny rafitra fiasa izay mbola kely isika, tsy hevitra tsara izany ary na dia kely kokoa aza raha atao amin'ny fitaovana lehibe. Ka mila mandray andraikitra fotsiny ianao. Milaza aminao aho mba hiandry ny fivoahan'ny ofisialy ary lazaiko anao mihitsy aza fa rehefa mitranga izany, manantena kely aza ianao. Fa raha te-hanandrana ireo fiasa vaovao ianao dia hanazava ny fomba fanatanterahana azy.
Raha te hahita ny zava-baovao rehetra ao amin'ny macOS Monterey toy ny Universal Control ianao, SharePlay FaceTime, ny mode Focus vaovao, ny app Shortcuts, Live Text, ny Safari vaovao ary maro hafa, tsy maintsy manaraka an'ity torolalana ity amin'ny taratasy ianao. Tokony hamaky hatrany ny zava-drehetra ianao, aza mankany mivantana amin'ny hevitra. Mahareta.
Ny zavatra voalohany ary averiko indray, dia ny hianaranao ny fomba fametrahana ny kinova beta ho an'ireo mpamorona macOS Monterey. Beta dikan, izany hoe amin'ny fitsapana. Fantatray fa namoaka ny kinova macOS manaraka amin'ny lohateny WWDC 21 i Apple ary nametraka ny beta developer ho fitiliana amin'ny Mac. Mandritra izany fotoana izany macOS 12 beta ho an'ny daholobe voalohany Monterey dia ho tonga amin'ny volana Jolay.
Raiso an-tsoratra izany vaovao izany. Ity beta ity dia natao ho an'ny mpamorona ihany. Ary ity iray hafa koa:
LNy fiasan'ny fanaraha-maso manerantany dia tsy misy amin'ny kinova beta voalohany ho an'ny mpamorona macOS Monterey, saingy manantena azy tsy ho ela izahay.
Ahoana ny fametrahana macOS Monterey developer beta
Aza adino ity azafady tsara kokoa ny mampiasa Mac faharoa hametraka macOS Monterey beta, satria fahita matetika ny olana amin'ny fahombiazana sy ny fahamendrehana. Mazava ho azy fa tadidio fa raha hametraka ny beta dia tsy maintsy manana Mac mifanaraka ianao. Azonao atao ny mahalala ny lisitra feno jereo ity fidiranay ity.
Raha mbola tsy voasoratra anarana ho developer Apple ianao, tsy maintsy hataonao eto izany. Raha tsy izany, afaka miandry ny programa beta ho an'ny daholobe ianao afaka manomboka amin'ny Jolay. Izahay dia mamaky ny dingana ilaina hanombohana mankafy ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa:
Mila manao a backup vaovao an'ny Mac anao. Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny macOS Monterey dia ny fahatsorana hamafana ny zava-drehetra tsy mila fepetra henjana.
Avy amin'ny Mac anao, mandehana mankany tranokala mpamorona avy any Apple
Kitiho ny kaonty en ny zoro ambony havanana ary midira raha mbola tsy nanao
Tsindrio izao ny kisary roa andalana eo amin'ny zoro ankavia ambony, mifidy Downloads ary alao antoka fa ny tabilao "Operating Systems" dia voafantina eo ambony
Tsindrio Ampidiro ny mombamomba eo akaikin'ny kinova beta an'ny macOS Monterey
Mandehana any amin'ny fampirimana fampidinana ary tokony ho hitanao ny fampitaovana fidirana macOS beta
Tsindrio indroa eo io Mba hametahana ny sary kapila ilaina, tsindrio indroa izao ny Access Utility.pkg hametrahana ny profil macOS beta amin'ny Mac
Ny System Prefers> Rindrambaiko fanavaozana ny lozisialy dia tokony hanomboka mandeha ho azy miaraka amin'ny kinova beta an'ny macOS 12, kitiho ny Update Now raha misintona ny fanavaozana (efa ho 12 GB ny habeny)
Rehefa vita ny fampidinana, hahita varavarankely vaovao ianao hametrahana macOS Monterey, tsindrio Manohy
Araho ny bitsika hamita ny fametrahana beta
Efa vonona ianao hizaha toetra sy hanampiana an'i Apple hanatsara ity kinova ity.
Azafady mba tadidio fa beta io. Aza manandrana raha tsy fantatrao izay hidiranao ao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Ahoana ny fametrahana ny macOS Monterey developer beta
Apple te-hanala ny teny miafina ao amin'ny macOS noho ny tenimiafinao